Caribbean Tourism Inochengetedzwa Zvakatarisira Nezve Kufamba kweZhizha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Caribbean » Caribbean Tourism Inochengetedzwa Zvakatarisira Nezve Kufamba kweZhizha
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Kurwisa • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Dhata kubva kuCaribbean Tourism Organisation nhengo dzenyika dzinoratidza kudzoserwa kwesiraidhi iyo yakatanga kupera kwaKurume 2020.
CTO nyika dzakashanda zvisina simba kuti dzive neiyo coronavirus uye kuvhurazve hupfumi hwavo.
ICaribbean iri kutanga kudzoreredza slide iyo yakatanga kupera kwaKurume 2020.
Kune humwe humbowo huri kuwedzera hwekuti pent-up kudiwa kuri kudzvova kumashure kwakawanda uye nekukurumidza nekukurumidza kupfuura zvakafanotaurwa.
Nemwaka wezhizha wegore ra2021 urikuitika, pane humbowo huri kuwedzera mumusika kuti kudiwa kwepent-up kuri kudzvova kumashure kwakawanda uye nekukasira kumhanyisa kupfuura zvakafanotaurwa nevafanotaura. Panguva imwecheteyo, iyo Caribbean Tourism Sangano (CTO) inokurudzirwa ne data kubva kunhengo dzenyika yedu, vakashanda vasinganeti kuve necoronavirus uye kuvhurazve hupfumi hwavo.
Kunyangwe zviri pamusoro, kuderera kwe60 muzana mukota yekutanga ya2021, zvichienzaniswa nenguva imwecheteyo gore rapfuura, kungangotaridza sekusina kukurudzira, kunyatsoongorora kungaratidza kuti maCaribbean ari kutanga kudzosera slide rakatanga kupera kwaKurume 2020.
Izvi zviri kuratidzwa nekuderera kwematanho ekuderera ayo maCaribbean anga achinyora kwemwedzi gumi nemashanu yapfuura. Kota yekutanga ya2020 yaive yekupedzisira nguva yematanho enguva dzose ekufamba, apo 7.3 mamirioni epasi rese vashanyi veusiku (vashanyi vanosvika) vakashanyira dunhu. MunaNdira naFebruary 2021, vanosvika mudunhu iri vakadzikira neanopfuura kungodarika 71 muzana kana vachienzaniswa nemwedzi miviri yakafanana gore rapfuura. Nekudaro, iyo 16.5 muzana inodonha munaKurume 2021 kana ichienzaniswa naMarch 2020 chiratidzo cheyero yekudzoserwa kwetsika yekudzikira kwenhamba yevanosvika vashanyi.
Iyo data yakaunganidzwa kubva kunzvimbo gumi nembiri dzinoshuma vashanyi vanosvika muna Kubvumbi 2021 inoratidza kuti yega yeidzi nzvimbo dzakanyoreswa kukura, kana ichienzaniswa naApril 2020, apo basa rekushanya rakadzikiswa pasi rose. Saizvozvowo, vashanyi vanosvika vakadzokororazve munzvimbo dzekuzivisa data muna Chivabvu. Izvo zvinofanirwa kutaurwa, zvisinei, kuti huwandu hwevashanyi-pamusoro pevashanyi uchiri pazasi pematanho anoenderana mu2019.
Zvazvino zvirevo zvakaitwa nevatambi vanokosha vevateveri vevanoitirwa iyo Caribbean musika wakakosha, zvave zvichikurudzira. Munguva yedu yazvino nhevedzano yehurukuro dzepamhepo, vese CEO we British Airways, Sean Doyle, uye VP yekutengesa yeCaribbean kuAmerican Airlines, Christine Valls, vakataura nezve huwandu hwepamusoro hwekufarira kuenda kudunhu. Nekudaro, Amai Valls vakaratidza kuti maCaribbean anga achikwira kuAmerican Airlines, aine avhareji 60 muzana mutoro unosvika mukupera kwaMay 2021, uye kuti iyo ndege yendege yakaronga kuva nenendege zhinji dzezuva nezuva kunharaunda ino zhizha kupfuura zvayakaita mu2019. American Airlines yakaudza CTO svondo rino kuti yakawedzera nzira shanu dzinoenda kuCaribbean zhizha rino, uye yechitanhatu ichawedzerwa muna Mbudzi - uye ichashandira nzvimbo makumi matatu neshanu muCaribbean.
Zvichienderana nezviratidzo izvi, iyo CTO inochengetedzwa netariro nezve tarisiro yekufamba zhizha, uye kwegore rose kusvika muna 2022.
Izvo zvinozivikanwa kuti tarisiro ipi neipi inofanirwa kudzikisirwa nenyaya yekuti nyowani COVID-19 kesi dziri kusimuka nekukurumidza muUK neUS, maviri emisika mikuru yeCaribbean. Izvi zviratidzo zvekuti hutachiona hunoramba huri hutyisidziro hukuru hunogona kukurumidza kudzosera chero kufambira mberi kwatakaita.